RASMI: Isku Aadka Wareega Group-yada Koobka Kubada Cagta Gobolada Somaliland Oo La Shaaciyay & Waliba Sida Ay U Wada Ciyaari Doonaan | Somalia News
Waxa maanta la sameeyay isku aadka wareega Group-yada ee tartanka kubada cagta ee Gobolada Somalland kaas oo dhamaadka bishan lagu qaban doono magaalada Hargiesa.
Isku aadka oo ay ka qayb galeen 14 kooxood oo matalaya Gobolada kala duwan ee Somaliland ayaa maanta lagu sameeyay wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Somaliland.
Isku aadka ayaa loo qaybiyay 4 Group oo Group-kiiba lu jiraan 4 Gobola waxana la filayaa in ay dhacaan ciyaaro xoogan marka tartanka la hilaabo.
Gobolka Maroodi jeed oo ah gobolka marti galinaya tartanka ayaa ku Jira Group-ka A isaga oo la Group ah gobolada Hawd, Buuhoodle iyo waliba Saraar.
Tartanka ayaa lagu bilaabi doonaa gobolada Hawd iyo Buuhoodle kuwaas oo 28 bishan wada ciyaari doona kulan dhici doona maalin Arbaca ah.
Previous articleWax ka baro luqadda sirta ah ee ay ku wada sheekeystaan haweenka
Next articleMaxay tahay arrinta laga faafiyey G/BANAADIR ee qabsatay baraha bulshada?